IELTS General Training စာမေးပွဲ ဖြေဆိုပါ။ | British Council
IELTS Academic စာမေးပွဲကို ဖြေဆိုပါ။
IELTS General Training စာမေးပွဲ ဖြေဆိုပါ။
ယနေ့ပဲ IELTS General Training စာမေးပွဲအတွက် စာရင်းပေးသွင်းလိုက်ပါ။
IELTS General Training စာမေးပွဲမှ သင့်ထံတွင် လက်တွေ့ကျသည့် နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကား ကျွမ်းကျင်မှုများ ရှိကြောင်း သက်သေထူပေးပါသည်။
IELTS General Training စာမေးပွဲမှ လက်တွေ့ကျသည့် နေ့စဉ်အနေအထားတွင် အင်္ဂလိပ်စကား ကျွမ်းကျင်မှုရှိမရှိ တိုင်းတာပေးသည်။ လုပ်ဆောင်ဖွယ်များ၊ စစ်ဆေးမှုများက အလုပ်ခွင်နှင့် လူမှုရေး အနေအထားများကို ထင်ဟပ်ပါသည်။
အောက်ပါတို့ကို လုပ်ဆောင်လိုလျှင် ဒီစာမေးပွဲကို ဖြေဆိုလိုက်ပါ။
ဘွဲ့ထက်နိမ့်သည့်အဆင့် သင်တန်းတက်ခြင်း၊ ပညာသင်ခြင်းပြုလိုလျှင်
အင်္ဂလိပ်စကားပြောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်သင်တန်းတက်ခြင်း ပြုလိုလျှင်
အင်္ဂလိပ်စကားပြော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်လိုလျှင်
သင့်နိုင်ငံတွင်း ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် အလုပ်အကိုင် ရရှိလိုလျှင်
ယူကေသို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်လိုလျှင် ယူကေဗီဇာနှင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတွက် IELTS (UKVI) အကြောင်း ဆက်လက်စူးစမ်းပါ။
IELTS General Training စရိတ် - ၂၉၅,၀၀၀ ကျပ်
စာမေးပွဲကြေးမှာဘာတွေပါဝင်လဲ။ စာမေးပွဲကြေးမှာပါဝင်ပြီးသားဖြစ်တာကတော့ သင့်အတွက်အ‌ထောက်အကူဖြစ်စေမယ့် လေ့ကျင့်‌ရေးပစ္စည်းများ၊ အစမ်းစာမေးပွဲများစသည်ဖြင့် အထူးပြင်ဆင်ထားပါတယ်။
ကြာချိန်- ၂-နာရီ ၄၅-မိနစ်
ပုံစံ-နားထောင်ခြင်း၊ စာဖတ်ခြင်း၊ ရေးသားခြင်း၊ စကားပြောခြင်း ဟူ၍ အပိုင်းလေးပိုင်း ပါဝင်ပါမည်။ ဗြိတိသျှကောင်စီတွင် IELTS စာမေးပွဲအတွက် စာရင်းပေးသွင်းသည့်အခါ တရားဝင် ဗြိတိသျှကောင်စီ စာမေးပွဲဌာနတွင် ကျင်းပပေးမည်ဖြစ်သည်။.
စကားပြောစစ်ဆေးမှုကို အခြားစာမေးပွဲအပိုင်းများနှင့် တစ်နေ့တည်းလုပ်ပေးခြင်း၊ တစ်ပတ်ကြို/တစ်ပတ်နောက်ကျ လုပ်ပေးခြင်းများ ရှိနိုင်ပါသည်။ သင်စကားပြော စစ်ဆေးခံရမည့် နေ့က အဓိကစာမေးပွဲနေ့နှင့် မတူလျှင် ကြိုတင်အကြောင်းကြားပါမည်။
၁. IELTS General Training အပိုင်း(၁)- နားထောင်ခြင်း
ကြာချိန်- ၃၀-မိနစ် + အဖြေစာအုပ်တွင် အဖြေရေးချရန် ၁၀-မိနစ်
ဖြေဆိုရာတွင် အောက်ပါတို့ကို အသုံးပြုရပါမည်။
အင်္ဂလ်ိပ်လူမျိုးစစ်စစ် အသံဖမ်းထားသည့် ဖိုင်လေးခုကို နားထောင်ပြီး မေးခွန်းအစဉ်အတိုင်း ဖြေဆိုရပါမည်။
အသံဖိုင်(၁) - နေ့စဉ်လူမှုဆက်ဆံရေး အနေအထားတွင် လူနှစ်ဦးမှပြောဆိုချက်
အသံဖိုင်(၂) - နေ့စဉ်လူမှုဆက်ဆံရေးအနေအထားတွင် လူတစ်ဦးတည်းမှ ပြောဆိုချက်၊ ဥပမာ- ဒေသတွင်း facility များအကြောင်း ပြောဆိုခြင်း
အသံဖိုင်(၃)- ပညာရေး/သင်တန်းအနေအထားတွင် လူလေးဦးမျှ ပြောဆိုချက်၊ ဥပမာ - တက္ကသိုလ်ဆရာတစ်ဦးနှင့် ကျောင်းသူ/သားတစ်ဦး assignment အကြောင်း ပြောဆိုချက်
ပညာရေးဘာသာရပ်အကြောင်း တစ်ဦးတည်း ပြောဆိုချက်၊ ဥပမာ- တက္ကသိုလ် ပို့ချချက်
အဓိက အတွေးအမြင်၊ အသေးစိတ်အချက်အလက်၊ ပြောဆိုသူတို့၏ ထင်မြင်ချက်၊ သဘောထားများ၊ စကားလုံးတစ်လုံး သုံးရသည့် ရည်ရွယ်ချက်၊ အတွေးအမြင်များ ဖော်ဆောင်ရာတွင် သင့်နားလည်မှု အထောက်အထားများ စသည်တို့ကို စာမေးပွဲ စစ်သူမှ စူးစမ်းရှာဖွေမည်ဖြစ်သည်။
၂. IELTS General Training အပိုင်း(၂)- ဖတ်ကြားခြင်း
အပိုင်း(၁)- သုတစာစု ၂-ပုဒ်၊ ၃-ပုဒ်
အပိုင်း(၂)- အလုပ်ခွင်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် သုတစာစု ၂-ပုဒ်
အပိုင်း(၃)- အထွေထွေအကြောင်းအရာ စာပိုဒ်ရှည် ၁-ပုဒ်
စာဖတ်ကျွမ်းကျင်မှု အမျိုးမျိုးကို စစ်ဆေးရန် ပုံစံထုတ်ထားသည့် မေးခွန်း ၄၀-ပါဝင်သည်။ အဓိကအချက်သိအောင်ဖတ်ခြင်း၊ အသေးစိတ်အချက်သိအောင်ဖတ်ခြင်း၊ အနှစ်ထုတ်ရန်ဖတ်ခြင်း၊ ဒဿနဆန်ဆန် ငြင်းခုံချက်၊ စာရေးသူ၏ ထင်မြင်ချက်၊ သဘောထားနှင့် ရည်ရွယ်ချက်ကို နားလည်သိရှိအောင်ဖတ်ခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။
စာအုပ်၊ ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်း၊ သတင်းစာ၊ ကြေငြာချက်၊ ကြော်ငြာ၊ ကုမ္ပဏီလက်စွဲစာအုပ်၊ ညွှန်ကြားချက်တို့မှ ထုတ်ယူထားခြင်းဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်စကားပြောဆိုသည့် ၀န်းကျင်တွင် နေ့စဉ်တွေ့ကြုံရမည့် အကြောင်းအရာများ ဖြစ်ပါသည်။
၃. IELTS General Training စာမေးပွဲအပိုင်း (၃)- အရေးအသား
ပေးစာရေးသားခြင်း (အနည်းဆုံးစကားလုံးရေ -၁၅၀)
စာစီစာကုံးရေးသားခြင်း (အနည်းဆုံး စကားလုံးရေ-၂၅၀)
၁- ပေးထားသည့် အခြေအနေတစ်ရပ်အတွက် သတင်းအချက်အလက် တောင်းဆိုခြင်း၊ ရှင်းလင်းပြခြင်းပြုရသည့် ပေးစာတစ်စောင်ကို ရေးသားရန်ဖြစ်သည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး၊ အလွတ်သဘောဆန်ဆန်နှင့် အလုပ်သဘောဆောင်သည့် စာများဖြစ်နိုင်ပါသည်။
၂- အမြင်တစ်ရပ်၊ ငြင်းခုံမှု တစ်ခု၊ ပြဿနာတစ်ရပ်ကို တုံ့ပြန်ရေးသားစေပါမည်။ မိမိရှုထောင့်မှ အတန်အသင့် ရေးသားနိုင်ပါသည်။
၄. IELTS General Training ဆိုင်ရာ စာမေးပွဲ အပိုင်း(၄)- စကားပြော
ကြာချိန်- ၁၀-၁၅ မိနစ်
အကျွမ်းတ၀င်ရှိသည့် အကြောင်းအရာများအတွက် မေးခွန်းအတိုအထွာများ၊ မှတ်ချက်- စာမေးပွဲဌာန တည်နေရာပေါ် မူတည်၍ စကားပြောစစ်ဆေးမှု အပိုင်းကို နောက်တစ်နေ့လုပ်ရန် စာရင်းသွင်းကောင်း သွင်းရပါမည်။
စကားပြောစစ်ဆေးမှုအပိုင်းတွင် သင့်အင်္ဂလိပ်စကား ပြောဆိုမှုကို စစ်ဆေးသည်။ စစ်ဆေးမှုတိုင်း အသံသွင်းထားပါသည်။
အပိုင်း(၁)- စစ်ဆေးသူမှ သင့်အကြောင်း၊ အိမ်၊ မိသားစု၊ အလုပ်၊ ပညာသင်ခြင်း၊ ၀ါသနာ အစရှိသည့် အကျွမ်းတ၀င်ရှိသည့် အကြောင်းအရာများ ယေဘုယျမေးမြန်းပါမည်။ ၄-၅ မိနစ် ကြာမြင့်ပါမည်။
အပိုင်း(၂)- ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကို ပြောဆိုခိုင်းသည့် စကားပြောကဒ်တစ်ခုကို သင့်အားပေးပါမည်။ နှစ်မိနစ်တိုင် စကားမပြောမီ ပြင်ဆင်ချိန် တစ်မိနစ် ရပါသည်။ ထိုအကြောင်းအရာကိုပင် စစ်ဆေးသူမှ မေးခွန်း တစ်ခု၊ နှစ်ခု ထပ်မေးပါမည်။
အပိုင်း(၃)- အပိုင်း(၂)မှ အကြောင်းအရာကို ဆက်လက်မေးမြန်းပါမည်။ ပိုမိုသိမ်မွေ့ နက်နဲသည့် အတွေးအမြင်၊ ကိစ္စများအကြောင်း ဆက်လက်ဆွေးနွေးခွင့် ပေးပါမည်။ ၄-မိနစ်မှ ၅-မိနစ်ကြာမြင့်ပါသည်။
Video call ဖြင့် IELTS Speaking စစ်ဆေးခြင်းကို အချို့ သော IELTS စာစစ်ဌာနများ တွင် စစ်ဆေးနေပြီဖြစ်ပါသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုသော် စာမေးပွဲဖြေဆိုသူများတွင် ရွေးချယ်စရာ IELTS Speaking test slot များပိုမိုရရှိလာမည်ဖြစ်ပါသည်။
Video-Call Speaking test ကို ဖြေဆိုရာတွင် တရားဝင်သတ်မှတ်ထားသော IELTS စာစစ်ဌာန၌ စာမေးပွဲစစ်ဆေးသူနှင့် လူတွေ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြေဆိုရသောသာမူလ စစ်ဆေးခြင်းကဲ့သို့ တူညီ၍ အဆင့်မြင့်မားသော စာမေးပွဲဖြေဆိုသူအထောက်အထားစစ်ဆေးခြင်းကို လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ဖြေဆိုရသော အကြောင်းအရာများ၊ အမှတ်ပေးပုံ၊ အချိန်သတ်မှတ်ချက်၊ ခက်ခဲမှုအဆင့်၊ မေးခွန်းပုံစံ နှင့် လုံခြုံရေးစီစဉ်မှုများ အားလုံးတူညီမှု ရှိပါသည်။
စာမေးပွဲစစ်ဆေးသူများမှ video-call ဖြင့်စစ်ဆေးပေးခြင်းဖြစ်သောကြောင့် စာမေးပွဲစစ်ဆေးသူနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်လူတွေ့ ဖြေဆိုရခြင်းပုံစံဖြင့်သာ စစ်ဆေးပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ (သို့) သင်နှင့် နီးစပ်ရာ ပြည်တွင်းစာစစ်ဌာနကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
IELTS General Training စာမေးပွဲအတွက် စာရင်းပေးသွင်းပါ။
အောင်မြင်မှုအစIELTS က။ အင်္ဂလိပ်စကားပြောသည့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင် ဘွဲ့ထက်အဆင့်နိမ့်သည့် ပညာသင်ကြားလျှင်၊ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်လိုလျှင် IELTS General Training စာမေးပွဲ ဖြေဆိုရန် လိုအပ်ပါမည်။
သင်စာမေးပွဲ ကောင်းကောင်းဖြေဆိုနိုင်စေရန် ဗြိတိသျှကောင်စီမှ အလေးအနက်ထား ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ စာရင်းသွင်းသည့်အခါ ဖြေဆိုခါနီး ကာလတိုင် Road to IELTS Last Minute သင်တန်းကို အကန့်အသတ်မဲ့ တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။ အကြံပြု စစ်ဆေးပေးသည့် ဗီဒီယို (၉)ခု၊ အပြန်အလှန်လုပ်ဆောင်ချက်(၁၀၀)နှင့် ကျွမ်းကျင်မှုလေးခုမှ တစ်ခုစီအတွက် လေ့ကျင့်ရန် အစမ်းစာမေးပွဲ နှစ်ခုစီ ပါဝင်ပါသည်။
IELTS General Training စာမေးပွဲကျင်းပမည့်ရက်ကို ရှာဖွေပါ
စာမေးပွဲအတွက် စာရင်းမသွင်းမီ မည်သည့် စာမေးပွဲမျိုး ဖြေဆိုရန် လိုအပ်ကြောင်း သင်လျှောက်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆန်းစစ်ပါ။